तारबारभित्र मतगणना कहिलेसम्म ?::Nepali News Portal from Nepal
कास्की क्षेत्र नम्बर २ सहित देशका ५२ ठाउँमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।चुनावी परिणाको कुरा पछिकै हो तर चुनावमा केही ठाउँमा अपेक्षाकृत कम मत खसेको छ । रोल्पामा सबैभन्दा कम मतदाताहरु निर्वाचनमा सामेल भएका छन् । कास्कीमा बम र बारुदको गन्ध र त्रासकाबीच मतदान सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन बिथोल्ने र मतदातालाई त्रसित बनाउने गरि यहाँको नवप्रभात निर्वाचन केन्द्रमा विस्फोट भयो । मतदाताहरुले बल्लतल्ल ज्यान जोगाए । अन्य केही निर्वाचन केन्द्रको वरपर पनि यस्तै विस्फोट हुन पुग्यो । विस्फोट कसले गरायो भन्ने फरक पाटो हो तर नागरिकको शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकारमाथि बोलिएको धावा कुनै पनि कोणबाट सही होइन । मतदाताले आफ्नो अभिमत मतपत्रमार्फत नै व्यक्त गर्न पाउनु पर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो । मतदातालाई धम्क्याएर, नागरिकलाई लक्षित गरि विस्फोट गराएर कुनै अमुक विचार स्थापित हुन सक्दैन । मतदातालाई धम्क्याएर आफ्नो चुनावी अभिष्ट पूरा गर्ने नियत नै हो भने यो लोकतन्त्रको लागि सुहाउने विषय होइन ।सबैखाले ंिंहंसालाई अस्वीकार गर्नु नै लोकतन्त्र हो । चुनावको मुखमा निहत्था नागरिकलाई तर्साउनेहरु कानूनी दायरामा आउनु पर्छ÷ल्याइनु पर्छ । यसो भनिरहँदा निर्वाचनको सुरक्षामा स्थानीय प्रशासन चुकेको कुरा भने बिर्सनु हुँदैन ।
चुनाव घोषणादेखि नै सुरक्षा संयन्त्र चनाखो अवस्थामा रहेको बताइएको थियो । मतदाता, मतदान स्थल र मतपत्रको सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गरिएको जिकिर पनि थियो । तर, प्रशासनको त्यो दावी मिथ्या सावित भयो । चुनावी सभामै विस्फोट हुँदा पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन नसक्नु प्रशासनको कमजोरी नै हो । श्रृंखलावद्ध विस्फोट हुँदा पनि नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु भनेको शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्केको भन्ने नै हो । चुनाव त आयो र गइहाल्छ । तर, अमूक समूहले आफूले चाहेको र कडा सुरक्षा अवस्था छ भनिएको ठाउँमा पनि विस्फोट गराउन सक्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । यो विषयप्रति प्रशासनले आउँदा दिनमा पनि सतर्कता अपनाउनु पर्छ । यो वा त्यो कारण देखाएर आफ्नो कमजोरी लुकाउने छुट प्रशासनसँग हुने छैन । रह्यो, चुनावको कुरा, चुनाव सम्पन्न भएको छ । नागरिकहरुका अभिमत मतपत्रमा सुरक्षित रहेका छन् । ती मतपत्रको सुरक्षा गर्दै सही तरिकाले परिणाम सार्वजनिक गर्नेतर्फ पनि आयोगको सचेतता हुनैपर्छ । यसअघिका निर्वाचनहरुमा मतपत्र नै च्यातिने, धाँधली हुने घटनाबाट पाठ सिक्न सक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले तारजाली लगाएर मत गन्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बाहिरी संसारले नेपालको यो दुर्गति देख्दा पक्कै पनि हाँस्दा हुन् । तर, हामी विवश छौँ । हामीले कस्तो संस्कार बसालेको छौँ र हाम्रो मनोवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउन मतगणनास्थलको उदाहरण नै काफी छ भन्ने हामीले बिर्सेका छौँ । बहादुर भनेर गर्व गर्ने नेपालीको लागि यो सुहाउने विषय होइन । जसरी पनि जित्नै पर्ने मानशिकताबाट ग्रस्त नेपाली राजनीतिको फोहरी पाटो देखाउने यो प्रवृत्ति आउँदा निर्वाचनहरुमा देख्न नपरोस् भन्ने कामना बाहेक अहिले हामी के पो गर्न सक्छौँ र ? चुनाव हो, हार–जीत स्वभाविक हो भन्ने मानशिकता विकास गराउन पनि यो उपनिर्वाचन सफल होस् ।